Archive du 20170612
Marc Ravalomanana “Marefo ny fanjakana”
Ao anatin’ny fiomanana tanteraka amin’ny fifidianana ny antoko TIM. Ny faran’ny herinandro teo dia nanatanteraka fiofanana ho an’ireo mpikambana mpitarika teny anivon’ny distrika eran’i Vakinankaratra izy ireo tao Antsirabe.
PM Solonandrasana Mahafaly “Hotohizana hatrany ny fiaraha-miasa amin’i Rosia”
Niarahaba ny vahoakan’ny Federasiona Rosiana sy ny filohany Vladimir Poutine, noho ny fanamarihany ny tsingerin-taona niforonany, tamin’ny alalan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ny zoma teo teny amin’ny tranon’ny masoivoho Rosiana Ivandry, ny praiminisitra Malagasy Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Feno hipoka ny efitrano malalaky ny Boriborintany faha-6 teny Anosisoa Ambohimanarina, ny sabotsy teo, nandray ireo ankizy niisa 200 nanaraka an’ilay « révision CEPE » nokarakarain’ny
Fiandrianam-pirenena Mpanentana 700 mianadahy no hitety trano
Mpilatsaka an-tsitrapo 700 mianadahy mianaka no indray hihetsika mialoha sy mandritra ny fetim-pirenena 26 jona ho avy izao.
Miarahaba ry Jean a! Inona indray izany izao ry Jean no ketrikareo manaraka fa toa tsy misy azo raisina mihitsy anie izay ataoanareo e! Na zavatra kely na lehibe ataoanareo dia vakiana fotsiny araka ny fitenin’ny tanora.
Mpamily nahafaty olona 3 teny Alarobia Misy mikendry hamono ?
Lasa resabe amin’izao fotoana ny momba an’ilay mpamily nahafaty olona 3 teny Alarobia ny takarivan’ny alahady 21 mey teo. Miparitaka any anaty tambajotram-pifandraisana “fesiboky” ny sarin’ilay tovolahy namily ilay fiara marika “mini cooper”, izay voalaza fa mamo kanefa mbola namily, ary izao namono olona izao.
Hery Rajaonarimampianina Miaro mafy ny Sinoa tao Soamahamanina
Natokan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina hanazavana ny antony hanatsarana ny fifandraisan’i Madagasikara amin’i Chine ny fandaharana Fotoam-bita andiany faha -6 nivoaka ny faran’ny herinandro teo.
Raharaha Claudine Razaimamonjy Halalino ny fanadihadiana, hoy ny depioten’Ambositra
Tantara mitohy tsy misy farany hatreto ny raharaha mahasaringotra ny mpandraharaha Claudine Razaimamonjy.
Fanjakana sy ny mpitsara Vao mainka hihenjana ny tady ?
Hiverina handray ny asany ny fitsarana taorian’ny roa andro nanehoan’izy ireo ny tsy fahafaliany manoloana ny fitsabatsabahana ataon’ny manampahefana isan-karazany ny asan’ny fitsarana.
Ho tontosaina ny 11 ka hatramin’ny 16 jolay any Antsiranana ny andiany faharoa amin’ny Racing Madagascar na ny hazakazaka an-tongotra “trail running à Madagascar” izay karakarain’ny Boogie Events, tarihan’i Patrice Raoull, rantsana mikarakara fanatanjahantena ao amin’ny Boogie Pilgrim izay misahana ny raharaha “Tour opérateur” nanditran’ny 30 taona teo Madagasikara.
Miverimberina ny tantara
Izay tokoa angaha no maha voasokajy ho tany an-dalam-pandrosoana ny tany an-dalam-pandrosoana.
Kaominina Talatamaty Zazalahy kely 100 natao hasoavana maimaimpoana
Handaniana hatrany amin’ny 80.000 Ar ny manao didimpoitra amin’izao eny anivon’ireo dokotera tsy miankina, raha tsy te-hilahatra.
Mpanara-maso ny fandoavan-ketra Sandoka izay mitaky vola
Manomboka anio dia hisy ny iraka mpanara-maso ny fandoavan-ketra (Agent de poursuite ; Regisseur Auxilliaire )
Faha-20 taonan’ny Baolai Mifanontona amin’ny fetin'ny Asaramanitra
Maro ny fety hankalazaina amin'ity volana jona ity. Ao ny fetin'ny ray sy ny fetim-pirenena. Efa ao anatin’ny volon’andro fety manaraka izay indrindra ny tranombarotra « Baolai », izay mankalaza ny faha roapolo taona nisiany amin'ity 2017 ity.
Ankizy hiatrika CEPE –Anosizato andrefana Notoloran’ny MAPAR fanomezana
Efa tena mihatra aman’aina mihitsy ny fahorian’ny vahoaka Malagasy ankehitriny, hoy ny antoko MAPAR etsy Anosizato Andrefana.
Fatin’olona nisy dia-nify Mihorohoro ny eny Ivato
Lehilahy iray hita faty teny Ivato ny alin’ny zoma ary rehefa nozahana ny razana dia nisy loaka toy ny diam-bangy roa izany teo amin’ny tendany.
Metisy karana maty teny Antsahabe Nahitana dian’antsy ny lohany
Lehilahy iray no hita faty teny Antsahabe Antsakaviro ny marainan’ny sabotsy 10 jona teo.
Lasa any Pretoria –Afrika atsimo hanatrika ny fihaonana an-tampony afrikanina andiany faha-3 momba ny fampandrosoana maharitra manomboka ny 13 jona ho avy izao ny ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana